समाजवादी पार्टीले सरकार नछाड्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मा वाबुराम भट्टराईलाई::Nepaloutline.com
समाजवादी पार्टीले सरकार नछाड्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मा वाबुराम भट्टराईलाई
काठमाडों । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा असन्तुष्ट भएको उपेन्द्र यादव र वाबुराम भट्टराईको पार्टीले समाजबादी दलले सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ । सरकारमै बसेर संघर्ष गरिरहने र पार्टीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको माग सम्बिधान संशोधनलाई पनि अगाडि बढाउद दबाब दिइरहने निर्णय गरेको छ ।
सरकारस्ँग असहमतिका विषयमा र पार्टीले उठाएको संविधान संशोधन गर्ने विष्यामा सहमति जुटाउन वार्ता गर्ने जिम्मा भने संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिइएको छ । भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छन् ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र सरकार गठनका क्रममा भएको संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयनबारे सरकार र सत्तारुढ दलसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । वार्ता गर्ने जिम्मा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दिइएको छ ।
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीले सत्ता साझेदार पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिइ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
पार्टीले उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाए पनि सरकार भने नछाड्ने निर्णय गरेको छ । समाजवादीको अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय पनि पुनर्गठनमा हेरफेर भएको थियो ।
शनिबार रातिसम्म बसेको पदाधिकारी बैठकले संयुक्त सरकारको राजनीतिक मूल्य, मान्यता र संस्कृति प्रतिकूल मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएकोमा आपत्ति जनाएको हो । दलले यसअघि भएको दुई बुँदै सहमति कार्यान्वयनमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पार्टीले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्ता टोली पनि बनाएको छ । सरकार र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई सतर्क रहन राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह
लकडाउन आवज्ञा गर्ने ३ सय ५२ भारतीय वीरगञ्जमा पक्राउ
कोरोना भाइरसको प्रकोप दोस्रो विश्व युद्धपछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती : राष्ट्र सङ्घ महासचिव
१० प्रतिशत छुटमा टोलटोलमा खाद्यान्न बिक्री गर्दै साल्ट ट्रेडिङ
काठमाडौं, १९ चैत । साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेशनले टोल टोलमा खाद्यान्न बिक्री भइरहेको जनाएको...
काठमाडौं, १९ चैत । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै त्यहाँ रहेका...
रुघाखोकीले तीन सय परिवार प्रभावित
बाजुरा, १९ चैत । बाजुरको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–३ पुडाबाब्लाको गाउँवासी रुघाखोकीको सङ्क्रमणले...
वीरगञ्ज, १९ चैत । कोभिड–१९को सङ्क्रमणलाई रोक्न देशव्यापी लकडाउन अवज्ञा गर्ने ३५२...
एजेन्सी । विश्वव्यापी प्रकोपको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण दोस्रो...
नेपाल बैंकबाट सातै प्रदेशलाई पाँच/पाँच लाख सहयोग
काठमाडौं, १९ चैत । नेपाल बैंक लिमिटेडले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि...
नेपाली दूतावास लण्डन सातै दिन खुल्ने
काठमाडौं, १९ चैत । बेलायतमा बढ्दो कोरोनाको महामारीले गर्दा अधिकांश कार्यालय बन्द रहेका...
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध विवेकशीलले दियो अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं, १९ चैत । विवेकशील नेपाली दलले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान...
नेपाल आउटलाइन बिशेष
सुचना विभाग दर्ता नम्बर : ९७१ / ०७५-७६ , Founder/Editor-in-Chief : Shailendra Basnet
© Copyright 2018 nepaloutline.com All rights reserved Site By : Sobiztrend